IBallindrum Farm - IntoKildare
IBallindrum Farm B&B ethola umklomelo isendaweni yobuhle basemaphandleni eningizimu yeKildare, ihora elilodwa ukusuka eDublin, okuyisisekelo esihle sokuhlola iKildare.
Ihlelwe phakathi kwezindawo ezisemaphandleni eziluhlaza, iBallindrum Farm B & B yimizuzu emihlanu kuphela ukusuka eM5. Ngokubukwa kwekhadi leposi lezithombe, le ndawo yokuhlala isepulazini lobisi elisebenzayo futhi ukuvakasha okuqondiswayo kwamahhala kuyatholakala uma kucelwa.
IBech Beech Lodge inikela ngenketho yokuhlala izinkanyezi ezinenkanyezi ezine. Isihlalo sabakhubazekile sifinyeleleka ngokuphelele ngamagumbi okulala amabili, eyodwa kabili kabili newele elinendawo yokugezela efinyeleleka ngesihlalo esinamasondo.
IBallindrum Farm nayo ingabhekela amaqembu afuna ukumiswa okuqabulayo ngetiye nangama-scones aphekwe ekhaya. Ukuvakasha kwepulazi nakho kuyatholakala futhi kufanele kubhukishwe ngaphambi kwesikhathi.
Indawo yokulala nokulala kwasekuseni, Ukuziphekela, Umndeni Friendly, 4 Star, Umjaho